Satechi USB-C haysa HUB Pro Dib u eegis loogu talagalay iMac | Waxaan ka socdaa mac
IMac waa qayb ka mid ah naqshadeynta iyo sidoo kale kumbuyuutar kumbuyuutar oo heer sare ah, maahan nasiib in uu noqday mid ka mid ah walxaha ugu caansan ee Apple, iyadoo hortiisa gebi ahaanba nadiif ka tahay fiilooyinka, dekeddaha ama badhamada. Laakiin taasi qiimo ayey leedahay, waana taas isku xirka wax dekedaha gadaashiisa mararka qaarkood waa dhaqaajin xirfadeed.
Waxaan tijaabinay mid ka mid ah xalka ay Satechi na siiso iyada oo leh USB-C Clamp HUB Pro, xarun taas ah Waxay kuxirantahay hal dekedo USB-C ah oo kuyaala iMac-kaaga, waxay siisaa ilaa lix dekedda isku xidhka hore, oo sidaas ayay ku qaadataa daryeelka ugu badan ee naqshadeynta iMac-gaaga.
2 Nadaafad iyo nidaam isku xidhka fudud
Satechi HUB-kan waxaa si gaar ah loogu talagalay in loogu isticmaalo iMac, gaar ahaan moodooyinka cusub ee 2017 oo ay ku jiraan dekedda Thunderbolt 3 (USB-C) ee ku yaal dhabarka kombiyuutarka. Waxay ka samaysan tahay aluminium, markaa waxay umuuqataa hal cunsur oo kale oo ka mid ah barnaamijyadeenna 'iMac', waxaana ku haysannaa isla labada midab ee aan ku iibsan karno iMac-geenna: cirro bannaan iyo lacag. Dareenka markaad qaadaneyso Satechi HUB waa mid aad uga duwan kan aaladaha kale ee la midka ah ee aan awooday inaan isku dayo, xoogaa ka jaban laakiin halkii laga sameyn lahaa caag Waxay umuuqataa mid adag oo sifiican ugufilan barnaamijkeena iMac.
Waxay leedahay laba boos oo kaararka ah (SD iyo microSD), saddex USB 3.0 dekadood, iyo hal dekedda USB-C Ma taageereyso Bixinta Awoodda, sidaa darteed uma shaqeyneyso in lagaa qaado iPad-kaaga, MacBook-kaaga ama si dhakhso ah u-soodejiso iPhone-kaaga. Qeexitaannada dekedda hore ma aha kuwa ugu dhakhsaha badan ee tikniyoolajiyadu oggolaato, laakiin taas waxaan u leenahay dekedda gadaal ee iMac, waxaanna uga tagi karnaa dekeddaha hore isku xirnaanta mararka qaarkood ee aan u baahnayn xawaaraha Thunderbolt 3 sidoo kale.
Nadaafad iyo nidaam isku xidhka fudud
Wax aasaasi ah markaan isticmaalno qalab noocan ah ayaa ah Waa inaad daryeeshaa dusha aluminium ee iMac-keena, adigoon ka tagin wax calaamado ah, ama ka xun, xoqid. Lifaaqa waxaa lagu sameeyaa iyada oo loo marayo hawo-qaboojinta hareeraha geeska hoose ee iMac, oo leh tabs lagu xakameynayo wareegga wareegga gadaashiisa HUB. Dhigista ama ka saarista waxay qaadataa daqiiqad. Waxaan leenahay wax yar marka loo eego inaan awood u yeelano inaan bidix ama midig u dhigno, laakiin wax yar, maaddaama xarigga isku-xirka uu gaaban yahay, sidaas darteed waa inuu had iyo jeer u aado dhinaca midig (sida aan u fiirineyno) kumbuyuutarkeena.
Satechi USB-C Dock ee loogu talagalay Dib-u-eegista iMac: Naqshadeynta iyo Shaqeyntu Waxay La Socotaa Gacanta
Qalabku wuu xasilloon yahay, qalabku ma guurguurayo mana dhacayo, laakiin si aan u gelino wax kasta oo USB ah waa inaan isticmaalnaa labada gacmood, maaddaama shaashadda iMac-geenna ay dhaqaaqeyso, sidaas darteed inaad hal gacan ku sameysid waa wax aan macquul ahayn. Xidhiidhku waa xasilloon yahay, qalabka si fiican ayaa loo hagaajiyaa mana jiraan wax xarig jaraya oo faragelinaya wareejinta feylka. Laydh yar oo ku ag yaal USB-C wuxuu muujinayaa in HUB uu ku xiran yahay iMac-kaaga.
Haddii aad waligaa ka yaabisay sababta iMac-kaaga USB-ga ama kaararka SD-ku ay gadaal uga socdaan, markaa waxaad ubaahantahay HUBkan Satechi. Qalab wanaagsan iyo naqshad ku habboon iMac-kaaga, qalabkan yar wuxuu ku siinayaa lix dekedood oo hore adigoo isticmaalaya kaliya hal USB-C kombiyuutarkaaga. Waxay sidoo kale leedahay qiimo aad u xiiso badan, waxaa laga heli karaa Amazon for 49,99 (isku xirka).
Satechi USB-C Hawada HUB Pro
Naqshadeynta tayada iyo qalabka
Lix dekedood oo hore
USB-C Awood Bixin la'aan
Maqal maqal malahan
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Satechi USB-C Hawada HUB Pro ee Dib-u-eegista iMac